ASEAN Film Week 2019 ပွဲကြီးမှ ''မီ''ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ပြသခွင့်ရသွားပြီ - Bees Media Myanmar
ASEAN Film Week 2019 ပွဲကြီးမှ ”မီ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ပြသခွင့်ရသွားပြီ
ဒါရိုက်တာဏကြီးရဲ့ ”မီ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ASEAN Film Week 2019 ပွဲကြီးမှာ ၂ ရက်တိုင်တိုင် ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဘူဆန်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ‘’ 2019 ASEAN Film Week Busan Guest Release’’ ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးရဲ့ ‘’မီ’’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်း ပါဝင်ပြသခွင့်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးရဲ့ ပွဲဦးထွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးရဲ့ ဇနီး သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ပိုင်ဖြိုးသုက ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။
”Bon Voyage ဦးရေခဲ ❤️ ဒီနေ့သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင် Busan ASEAN film week မှာပြခွင့်ရလို့ သူကိုရီးယားကိုသွားရတဲ့နေ့ 🥰မြန်မာဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူရဲ့ပွဲဦးထွက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို Busan ASEAN film weekလိုမျိုးမှာပြခွင့်ရတာ သူဂုဏ်ယူရှာမှာပေါ့။ အဲဒါကို မနေ့က congratulations boo bear ဆိုပြီး post လေးတစ်ခုတင်ခဲ့တာကလွဲလို့ ကိုယ်အဲဒီပွဲအကြောင်းလည်းသူ့ကိုသေချာမမေးခဲ့မိဘူး”လို့ အစချီကာ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဗစ်တိုးရီးယား ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဏကြီးက ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အကုန် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အစမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်စာရေးဆရာမကြီး ကြည်အေးရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဝတ္ထုတွေထဲက တစ်ခု ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ သရုပ်ဆောင် နေတိုး၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ ရဲအောင်၊မင်းဦး၊ အောင်ရဲထိုက် နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ပိုးမမှီသာရဲ့ အလှ
Beauty • Celebrity • Fashion • Local
Celebrity • Local
လူကြီးဆန်ဆန် ပုံစံနဲ့ ကြိုးဖုန်း Premier Show...
Celebrity • Entertainment • Local
နိုင်ငံခြားမင်းသားအလား သန့်ပြန့်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်
ထီပေါက်ခဲ့ရင် သိန်း ၅ ထောင်လောက်ကို...
Now & Ever က ရုပ်ရှင်ရဲ့သဒ္ဒါမှားနေတယ်လို့ ဆရာ...
“မိုးဒိ” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ မီးထိုး၊...
ရန်ကုန်ရှိ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂလိကဆေးရုံးတွင် Covid...
Enoki အပ်မှိုနှင့် Listeria...
MRTV-4 မှာ မကြာမှီထုတ်လွှင့်ပြသသွားတော့မယ့် Legends...
ရဲရင့်အောင်နဲ့ လမ်းခွဲ ပြတ်စဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့...
Copyright © 2020. Created by Bees Media Myanmar.